के हामी रोबोटिक कुल स्टेशन ओगटेका छौं? - Geofumadas
अगस्त, 2010 जीपीएस / उपकरण
केहि दिन अगाडि हामीले एउटा भू-कल्पित साथीसँग मीठो कुराकानी गर्यौं जुन प्रयोगको बारेमा म अहिले प्रतिबिम्बित गर्दैछु, र यदि रोबोटिक्सले कुनै पनि तरिकामा समय कम गर्न मद्दत गर्दछ भने। यहाँ म वार्ताको अंश संक्षिप्त गर्दछु।
हामी रोबोट स्टेशनलाई के भन्छौं।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो एक उपकरण छ जुन आफैंमा लक्षितको लागि खोजी गर्न एउटा कार्यक्षमता हुन्छ, स्क्यान भइरहेको बेला सम्म यसले यसलाई फेला पार्दैन। यी म्यानुअल कलेक्टरको साथ काम गर्छन् कि प्रिज्म अवस्थित छ जहाँ बाट स्टेशन संचालन।
प्रत्येक ब्रान्डसँग पहिले नै यो खिलौनेहरू छन्, मैले यो देखेको सर्वोत्तम फोकस हो।
सोकियालाई थाहा छैन यदि यो पहिले नै प्रतिबिम्ब छ, तर Topcom, दुवै Ashtech को भाग।
कहिले प्रयोग गर्ने छैन।
पारंपरिक सर्वेक्षणहरूमा, क्याडास्ट्रेको रूपमा हो, मैले देखेको थोरै प्रयोग, कम्तीमा यी दुई कारणहरूको लागि:
१. यो ढिलो हुन सक्छ। के हुन्छ भने यदि स्टेशन अपरेटरले उपकरणहरूको स्तर छोड्छ, म्यानुअल कलेक्टरलाई लिन्छ र प्रिज्मको साथ उपकरणहरू पत्ता लगाउन प्रतीक्षा गर्न जान्छ, ऊ केहि आश्चर्यचकित हुनेछ। ती मध्ये एक उपकरणले प्रिज्म फेला नपरेसम्म घडीको दिशामा स्वीप गर्दछ, र यदि यो विपरित दिशामा गइरहेको छ भने, प्रत्येक बिन्दुको लागि यसले लगभग पूर्ण मोडलाई स्क्यान गर्दछ।
हुनसक्छ, एक मित्रले भने geofumadoयदि यी उपकरणहरूमा सेन्सर छ जुन उच्च फ्रिक्वेन्सी UHF का साथ काम गर्दछ, जसले छिटो qu क्वाड्रन्ट स्वीपहरू बनाउँदछ, जसले गर्दा यसले प्रिज्म पत्ता लगाउँदछ र त्यसपछि मात्र त्यो क्वाड्रन्टमा स्वीप गर्दछ। यसले धेरै समय बचत गर्छ।
२. यो सुरक्षित छैन। यो मापदण्ड थियो स्मोक गरियो भाग मा, श्रम महँगो छ र यो श्रृंखला श्रमिकहरु बचाउन सम्भव छ जहाँ देशहरूको सोच। यस तरिकाले, सर्वेक्षण स्टेसन अपरेटर बन्छ र प्रिज्म हिड्ने एक पनि, एक व्यक्ति जो तिपाई बोक्छ, उसको आफ्नै अंगरक्षक, संक्षेपमा, सम्पूर्ण। तर यो मापदण्ड स्प्यानिश भाषा बोल्ने देशहरूमा लागू हुँदैन जहाँ एक चेजर भुक्तानी लागत अपेक्षाकृत कम छ र जहाँ विकसित देशहरूमा यसको विपरित, कुल स्टेसनहरूको चोरी हुन्छ यदि तपाईंको पक्षमा सशस्त्र गार्ड छ भने पनि।
प्रयोग गर्ने व्यावहारिक जस्तो छ प्रतिबिम्ब। यो कार्यक्षमता जुन आधुनिक स्टेशनले ल्याउँदछ, जसले सम्पूर्ण क्षेत्र स्क्यान गर्दछ, साथ साथै रडार, र त्यसपछि यो तीन-आयामिक जालको रूपमा प्रशोधन हुन्छ। उदाहरण को लागी, एक काम को हुनेछ जहाँ विशाल पृथ्वी आन्दोलन, कटौती, फिलिंगहरु भइरहेको छ; बिहान6मा स्वीपको साथ, प्रारम्भिक अवस्था प्राप्त हुनेछ, उही बिन्दुमा उभिएर, दिउँसो at बजे, minutes मिनेटमा उत्पादित खण्डको हिसाब प्राप्त हुनेछ।
साथै अत्यधिक विशेष कामका लागि, हेक्सागन पृष्ठमा लििका द्वारा घोषणा गरिएको एक जस्तै (एक कम्पनी जसले हालैमा Intergraph किन्यो).
यदि यी दिनमध्ये एक, संयुक्त राज्य अमेरिकाले उनलाई जर्ज वाशिंगटनको नाकमा प्रत्येक स्वागतको अध्ययन गर्न कोसिस गर्छ ... निश्चित रूपमा, एक रोबोटिक्स आदर्श हो।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो नगरपालिका कैडेस्ट्रे, जो विधि उपयुक्त छ
अर्को पोस्ट नक्सा सर्भर द्वारा निर्णय गर्दैअर्को »
7 को जवाफ "के हामी रोबोटिक टोटल स्टेशन ओगटेका छौं?"
हाहाले उनीहरूलाई अभिवादन गरे
कार्लोस चेव भन्छिन्:
कसैले मलाई बताउन सक्छ कि यदि रोबोट कुल स्टेशनमा यसलाई मैन्युअल रूपमा प्रयोग गर्न विकल्प छ भने, काम गर्न
कुल रोबोट स्टेशनमा परमिट हुनु पर्छ वा अतिरिक्त रूपमा एक कार्यक्रम खरिद गर्नुपर्छ।
Felix Nuñez भन्छिन्:
उत्कृष्ट पृष्ठ मेरो बुरेमा ब्राउज गर्नु भन्दा राम्रो छ र यो पृष्ठमा च्याट गर्दै। बधाई छ!
«… जब परिपक्वता को स्तर धेरै माथि पुगेको छ, यो त्यो स्तरको लागि लेखिएको हुन्छ, निम्न ब्लगहरूमा कुनै समय व्यर्थ हुँदैन जुन ती अपेक्षाहरू पूरा गर्दैन। »
यो सम्भावना छ कि दृढता एक अवधारणा हो जहाँबाट हामी सबैले यस जीवनमा केहि सिक्न सिक्यौं। म आफैँ, यस कारणले मैले त्यस्ता धेरै टिप्पणीहरू जितेको छु; म अब तिनीहरूलाई मध्यम, म तिनीहरूलाई मजा राम्रो।
र यदि यो प्रशंसाको बारेमा हो भने, जब परिपक्वताको स्तर धेरै उचाई पुग्यो, त्यो स्तरको लागि लेखिएको छ, निम्न ब्लकहरूमा समय गुमाउने छैन जुन ती अपेक्षाहरू पूरा गर्दैन।
किनभने ARIN WHOIS डेटाबेस एक भन्दा बढी सामग्रीमा पुनर्वितरणको साथ गुप्तचर हुन सक्छ, एक भन्दा बढी समावेश गर्दछ, एक भन्दा बढी CMS मा।
यो अर्थमा एक दुर्लभ खराब ब्लग हो जसको साथ फ्लोरेन्टिनो फर्नानेज यसो भन्छिन्
मलाई यो ब्लग धेरै धेरै मन पर्छ।